बाँकेको कोहलपुरमा भएको सडक दुर्घ-टनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ । कोहलपुर नगरपालिका–३ किरणनाला नजिकै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा बर्दियातर्फ जाँदै गरेको भे १ख २२३९ नं को बस र कोहलपुरतर्फ आउँदै गरको...
गुल्मी - बुधबार गुल्मीमा भएको जिप दुर्घ-टनामा आमा गु-माएकी चार वर्षीय बालिका जिल्ला अस्पताल तम्घासमा यता उता चाहर्छिन् । सोही अस्पतालमा उनका पिता प्रकाश नेपालीको उपचार भइरहेको छ । गुल्मीकै...
काठमाडौ- बैतडीमा क र णी पछि ह त्या गरिएकी भारगथी भट्टको श व परिवारले घ-टना भएको १७ दिन पछि दाह संस्कार गरेका छन् । उनीहरुले भागरथीको श व बुझेका छन् । प्रहरी अनुसन्धान पछि अभियुक्त सार्वजनिक गरेपछि...
एमालेको नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई हेलिकप्टर लिएर ससुराली गएका छन् । केही समयअघि आफूभन्दा आधा उमेर कान्छी युवतीसँग विवाहबन्धनमा बाँधिएका राई श्रीमतीका साथ हेलिकप्टर चार्टर...
५० बर्षिय मुख्यमन्त्री राई ३० बर्ष कान्छि पुर्वमिस मंगोलसँग बिवाह गर्दै
पुर्व मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठको बिन्दास मुड, हेराैँ ११ तस्बिर
पछिल्लो समय टिकटक युवा पुस्तामाझ निकै लोकप्रिय भइरहेको छ । कतिपयले टिकटकमा राखेका छोटा भिडियोका कारण अवसर पाएका छन् भने कोही सेलीब्रेटी नै बनेका छन् । नेपालमा पछिल्लो केही समय यता भने टिकटक प्रयोगकर्ताहरु बढिरहेका छन् । अभिनय...
वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरै युवाहरुको घर उजाडीएको उदाहरण देखिएका छन् । युवकहरु खाडी मुलुकमा पसिना बगाएर काम गरिरहेका हुन्छन् । तर सन्तान लिएर गाउँमै बसेका श्रीमती भने पारिवारिक दवाव, सामाजिक अपहेलनाका कारण गलत बाटो अपनाएका थुप्रै...
एजेन्सी – विवाहपछि वैवाहिक सम्बन्धलाई बचाउन र राम्रो बनाउन मै सबैको जोड हुन्छ । वैवाहिक स-म्बन्ध यस्तो स-म्बन्ध हो...
आजकाल बालबालिले धेरै समय मोबाइलमा बिताएको पाइन्छ । अभिभावकको लागि पनि बालबालिकालाई भुल्याउने गतिलो माध्यम बनेको...
सुर्खेत जिल्ला चौपान्य गाउ`पालिका वडा नं ४ का गगन बहादुर राव जो कामको शिलशिलामा कोरियासम्म पुगेका थिए र दैवको यो कस्तो खेल कमाउन गएको छोरो बाक समा फर्कियो । यो घटना यसरी पनि अति दर्द-नाक भयो कि...
अमेरिकाको लोमा लिन्डा युनिभर्सिटी तथा फ्रान्सको नेसनल दा ला रिसर्च अग्रोनोमिकका शोधकर्ताहरूले ८१ हजार जनामाथि एक अनुसन्धान गरे । उक्त अनसन्धानले देखाए अनुसार मासुबाट भन्दा ड्राइ फ्रुट्स तथा बीउबिजनबाट प्राप्त हुने प्रोटिन...
स्त न मा-ड्दा महिलालाई हुन्छ यती धेरै फाइदा, कसरी मा-ड्ने स्त न ?
सम्भो-गअघि महिला-पुरूषले जान्नैपर्ने १० कुरा !
से'/क्स जहिले पनि सुरक्षित रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि से'/क्स गर्नेले त विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । असुरक्षित से'/क्सका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा क'/ण्ड/मको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यो'/नै सबैभन्दा सजिलो साधनको रुपमा पनि...